“Bilawga xili ciyaareedka ma jirto cid xasuusatay Cristiano Ronaldo, laakiin isaga waa tusaale fiican” _ Nacho Fernandez – Gool FM
“Bilawga xili ciyaareedka ma jirto cid xasuusatay Cristiano Ronaldo, laakiin isaga waa tusaale fiican” _ Nacho Fernandez
(Real Madrid) 09 Okt 2018. Daafaca kooxda Real Madrid ee Nacho Fernandez ayaa muujiyay taageerida uu u hayo tababare Julen Lopetegui, xili ay Los Blancos aysan wax guul ah gaarin 4-tii kulan ee lasoo dhaafay.
Julen Lopetegui ayaa xili horeba shaki xoogan la galinayaa mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid kadib markii ay natiijo xumi ay Los Blancos lasoo kulantay, laakiin Nacho ayaa si weyn u taageeray macalinka reer Spain.
“Waxaan la jirnaa macalinka ilaa iyo heer dhimasho, si buuxda ayaan ugu taageeri doonaa qolka labiska, kadib dhibaatada iyo natiija xumida ay kooxda wajaheyso xiligan”.
“Bilawga xili ciyaareedka waxaan dhalinay goolal badan, cidna ma xasuusanin Cristiano Ronaldo, kaasoo insa Juventus kaga bilaawday goolal la’aan, si kastaba Cristiano waa halyay kooxda Real Madrid, wuxuuna muhiim u ahaa guulaheena”.
“Cristiano aad buu muhiim inoogu ahaa sababtoo wuxuu dhamaadka xili ciyaareedka dhalin jiray 50 gool, laakiin ma eedeeneyno, mana ku noolaan karno wax laga soo tagay, waa inaan horey u sii soconaa, laakiin isaga waa tusaale fiican”.
Michael Carrick oo ka warbixiyay niyad jabkii uu kala kulmay guul darrada finalkii Champions League ee 2009-kii
Manchester United oo Wajaheysa xaalad Culus oo Ku Aadan ZIDANE iyo Koox Weyn oo Haatan Dooneysa Macalinkii Hore ee Real Madrid